Ahoana ny fametrahana FSX amin'ny Windows 8 / 8.1 / 10? - Rikoooo
Ahoana ny fametrahana FSX amin'ny Windows 8 / 8.1 / 10?
Raha hametraka FSX (dikan rehetra) amin'ny Windows 8 / 8.1, dingana manaraka ireto:
1- Hametraka FSX ara-dalàna miaraka amin'ny DVD.
2- Rehefa tapitra ny fametrahana, marina tsindrio eo amin'ny «fsx.exe» (amin'izay hahitanareo eto: C: \_ Program Files (x86) \_ Microsoft Games \_ Microsoft Flight simulator X). Eto, mifidy ny «fifampifanarahana mifamadika» kiheba sy nanangana ny varavarankely toy ny aseho eto ambany:
3- Download potika ny 32 dikan-« UIAutomationCore », Unzip ny antontan-taratasy ary apetaho azy FSX lehibe indrindra ao amin'ny fampirimana (C: \_ Program Files (x86) \_ Microsoft Games \_ Microsoft Flight simulator X \_). Izany no hanitsy ny olana ny tsy ampoizina nianjera ny FSX.
Ankehitriny, rehefa afaka izany dingana kely, FSX dia tokony ho mafy orina ao amin'ny Windows 8 / 8.1 sy 10